Resaky ny mpitsimpona akotry : herisetra sy lalao maizina | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : herisetra sy lalao maizina
Asa izay iray mamafy lainga, na ny tandapan’i Hery na ireo mpiara-miasa amin’i Lalao. Tsy fantatra moa ny marina ao anaty sehatra pôlitika noho ny toetra asehon’ny maro amin’ireo mamelon-tena amin’ny fanaovana antom-piainana ny fandraisana adidy ao. Tsy misy fetra intsony na herisetra na lalao maloto eo amin’ny ady ifanaovana miteraka fifankahalana mifamaly. Sarotra no hisian’ny zava-banona rehefa sady samy lany henatra no samy tsy mahalala fady. Asa na teny Iavoloha no nisy fanakantsakanana tamin’ny fandefasana fanasana ho an’ny Ben’ny Tanàn’ny Renivohitr’i Madagasikara, na teo amin’ny Lapan’ny tanàna no nisy nandentika izany fanasana izany. Ny firenena no afa-baraka eo imason’izao tontolo izao noho ny tsy fanajana ny arofenitra araky ny fomba eran-tany. Tsy miafina fa mitaiza lonilony ny fitondrana isan-tsokajiny ary tsy menatra intsony mampiseho fanavakavahana amin’izay mpiray tanindrazana samy tompon’andraikitra. Tsy te hahafantatra ny vahiny. Ny hany azony eritreretina dia na mahalikiliky ny fitondrana foibe na maneho fidongiana ny Ben’ny tanana.
Araky ny fomba fanao eran-tany, izay ara-drariny ihany koa dia rehefa misy vahiny ambony mitsidika eo amin’ny firenena iray dia naman’ny mpampiantrano ny Renivohitra ka anisan’ireo lohalaharana ny Ben’ny Tanàna, omena toeram-boninahitra sady mandray fitenenana fampandrosoana am-panajana ny vahiny. Efa tsy tafa izany tamin’ny Fivorian’ny Comesa, mbola tsy hita taratra indray i Ramatoa Lalao Ravalomanana tamin’ny fitokanana ny vohitra kely fandraisana ny vahiny etsy Andohatapenaka.
Tsy hisolo vaika ny mpitsara ka hisosososo hanameloka ny ankilany na hanasoketa ny andaniny. Ny tsy fitoviana tadin-dokanga ve dia ho ampy hanalana tsiny izany fomba lany henatra amin’ny fanahazana lamba maloto izany ? Ny fifaninanana miofo ho firafesana eo amin’ny fifidianana izay heverina hahitana ny filatsahan’i Rajaonarimampianina sy Ravalomanana ve tsy hay ampanginina ho fitandrovana ny hajan’ny Firenena? Samy milaza azy ho dadany, mendrika ho Mpitondra firenena nefa tsy mahatsindry fo fa mivarina mampiseho toetran-jaza. Ny firenena very haja ary izay tratra ho tompon’antoka amin’izany kilalao maloto izany dia ho very hasina. Na ho ela na ho haingana, na hifanilika aza ny roa tonta, tsy maintsy hiseho ny marina. Tsy fantatra raha hanao fanadihadiana hampitsikafona izay fositra izay ireo mpifaninana hafa.